Ukungawuhloniphi umthetho wenkampani kungakuxoshisa – Bayede News
IZINQUMO ezathathwa engqungqutheleni yomfelandawonye wezinyunyana enkululakazi
by Bayede-News Posted on 17 January 2019 24 January 2019
IZINQUMO ezathathwa engqungqutheleni yomfelandawonye wezinyunyana enkululakazi ezweni iCosatu ngoMandulo wezi-2018 ngokuhamba kwesikhathi zizoba nomthelela endleleni okuqhutshwa ngayo izinto ezimbonini.
Izinyunyana zinezwi elizwakalayo ezimbonini ngoba zifana nomxhumanisi phakathi kwabaqashi nabasebenzi.
Ngakolunye uhlangothi izinyunyana akumele zifake abantu ehlathini ngokuthi zibenze bavaleke amehlo bazibone sebenamalungelo adlula awabaqashi. Kumele ngaso sonke isikhathi abantu bakhumbule ukuthi ukusayina isivumelwano sokusebenza emuva kokuqashwa akusho ukuthi umsebenzi usenamalungelo amakhulu enkampanini nokuthi usengaziphatha noma yikanjani.
Ngenxa yamandla anikwe izinyunyana ezimbonini sekuvamisile ukuthi umsebenzi azibone kunguye obaluleke kakhulu enkampanini ngaphazulu komqashi. Kokunye kuze kufi ke ezingeni lapho abasebenzi sebezishaya isifuba ngokuthi umsebenzi angeke uqhubeke ngaphandle kwabo, bakhohlwe ukuthi umqashi unamalungelo amakhulu ngaphezu kwabo.
Umqashi nguye onelungelo lokuvikela ulwazi lwenkampani. Ukungenisa kwezinlundla zokuxhumana kunesandla esikhulu ekuqhubeni phambili ukungaziphathi kahle kwabasebenzi nokukhohlwa ukuthi ilungelo labo lihamba ligcine kuphi.
Kwenye ingosi yangaphambilini lapho besikhuluma khona ngelungelo lomqashi nomsebenzi sakuveza ukuthi nukuthatha izithombe ezindaweni ezibucayi nalapho kungavumelekile khona uma kwenziwa umkhiqizo enkampanini kuyicala.
Ukwenza isibone, ngezinkampani ezikhiqiza izimoto kukhona lapho kungavumelekile ukuba kuthathwe khona izithombe ngoba kungenzeka uthathe lezo zithombe bese zitholwa izimbangi okungezinye izinkampani zezimoto zibone ukuthi umkhiqizo walabo uhlanganiswa kanjani. Icala eladonsa amehlo kwaba ngelaliphakathi kwenyunyana iNational Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) noRafee ngowezi-2007.
Kuleli cala umsebenzi wasebenzisa iselula yakhe ukuthwebula izithombe kulayini womkhiqizo. Ngesikhathi umqashi ethola ngokwenzekile, umsebenzi wanikwa isexwayiso ngomlomo sokuthi akavumelekile ukuthatha izithombe lapho kwenziwa khona umkhiqizo wenkampani. Njengoba sivule ngokuthi izinqumo ezithathwe engqungqutheleni yeCosatu zingaba nawo umthelela ezinqumweni zezinyunyana ngabasebenzi abasuke besemacaleni, yingoba iCosatu inqume ukuthi sekuyiyo ezoba nezwi lokugcina futhi izongenelela ezinqumweni ezithathwa izinyunyana ezingaphansi kwayo. Obekwenzeka ngaphambi kwalokhu ukuthi izinyunyana bezinamandla okuzilawula njengoba kwenzeka kuNumsa okwase kungathi ingaphezulu kweCosatu.
Kwelinye icala elaliphakathi kwenkampani ezimele yamakhemikhali ebizwa ngokuthi iChemSpecialist South Africa nenyunyana iNational Education Health and Allied Workers Union (Nehawu), umsebenzi wabanjwa kukhona akubhalayo epheshaneni ngesikhathi abanye abasebenzi bematasa nomsebenzi. Umqashi wabona sengathi kukhona lo msebenzi akubhalayo okuyimfi hlo yenkampani eyisebenzisayo ukuhlanganisa amakhemikhali. Umsebenzi waxoshwa ngoba kuthiwa uthatha ulwazi oluyimfi hlo lwenkampani uyolusebenzisa ngaphandle, noma uyofeza izinhloso zakhe. Ezithethelela umsebenzi wabeka ukuthi izifundo azenzayo ngasese zihambisana nalokhu akwenza emsebenzini futhi konke abekwenza ubekwenziswa intshisekelo nothando lomsebenzi.
Udaba lwadluliselwa kumxazululi okwathi ekudingidweni kwalo kwatholwa ukuthi akukho okubi okwnziwe umsebenzi, akukho lapho kwatholwa khona ukuthi umsebenzi wenze ukungathembeki, noma wayenezinhloso ezingezinhle ngesenzo sakhe. Umsebenzi wabuyiselwa emsebenzini kodwa wabe eselulekwa ngokuthi afunde imithetho yenkampani.
UMornique Jefferson uneziqu zaBA, LLB kwezomthetho azizuza eWits naseNyuvesi iRhodes. Ungummeli enkampanini iBowman Gilfi lla. Ezinze eGoli